Ama-Emulsions ka-Oyili-Emanzini - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-emulsion iqukethe iziphuzo ezimbili ezingabonakali, ezihlakazeke kahle komunye nomunye. Ukuze uthole ama-emulsion wamanzi kawoyela, isigaba esinamafutha (isigaba esihlakazekile) sihlanganiswe ngokulinganayo esigabeni esinamanzi (isigaba esiqhubekayo). Ama-emulsifiers e-Ultrasonic asungulwe kahle ukulungiselela ama-emulsions ka-oyela-emanzini kanye nama-nano-emulsions. Ama-emulsions e-Ultrasonic ahamba phambili ngokusabalalisa kwe-droplet efanayo nokuzinza kwesikhathi eside.
Ama-Ultrasonic Amafutha-Emanzini Amanzi
Ama-emulsions ka-oyela-emanzini (O / W) asetshenziswa kakhulu emikhiqizweni eminingi yabathengi njengokudla, iziphuzo, izimonyo, imithi yezokwelapha njll kanye nasembonini (isb. Isayensi yezinto ezibonakalayo, ama-polymers, opende, ukumboza, i-chemistry enhle njll.) .
Incazelo ye-Emulsion ka-Oyili-Emanzini
I-emulsion kawoyela-emanzini iyinhlanganisela lapho isigaba esinamafutha sisakazeka emanzini noma kolunye uketshezi olunamanzi. Amaconsi amancane kawoyela ahlakazeka kahle esigabeni samanzi (isigaba esiqhubekayo) ukudala le emulsion kawoyela-emanzini. Uma uwoyela (isigaba esasakazekile) sisakazeka emanzini (isigaba esiqhubekayo), kungu-emulsion kawoyela-emanzini; uma amaconsi amanzi efakwa esigabeni esinamafutha esiqhubekayo, ibizwa ngokuthi i-water-in-oil emulsion.
Ukulungiselela i-emulsion ka-oyela-emanzini, ikhwalithi ye-emulsion evelayo incike ekwakhiweni (uwoyela: isilinganiso samanzi, umenzeli we-emulsifying) kanye nendlela ye-emulsification. Ama-emulsifiers e-Ultrasonic enza i-acoustic cavitation, okuholela emandleni amakhulu ashear aphezulu kanye nokuxokozela kuketshezi. La mandla amakhulu kakhulu aphazamisa izigaba ezimbili zoketshezi ezingafakwanga zibe ngamaconsi emizuzu futhi azixube ngokufana. I-Ultrasonic emulsification ingakhiqiza kalula izinhlayiya ezinama-nano ngosayizi wamaconsi afinyelela ku-10nm. Usayizi omncane kakhulu wamaconsi kanye nokusatshalaliswa okufana nokwehla kwamaconsi emulsions okulungiselelwe nge-ultrasonically kuguqula i-sonication ibe yindlela yokuncoma ye-emulsification.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Emulsification
I-Ultrasonic emulsification idlula amanye amasu we-emulsifying afana ne-high-pressure homogenization, ukuxubana okuphezulu kwe-shear kanye ne-microfluidization ngokusebenza kahle, ukukhiqizwa okungaguquguquki kwama-nano-droplets, ukuzinza okuphezulu kwe-emulsion kanye namandla okuphatha noma yiliphi ivolumu kusuka kumashubhu amancane namabhiya ukuya emifudlaneni emikhulu.
Isibonelo, u-Li no-Xiang (2019) bakhombisile esifundweni sabo sokuqhathanisa se-homogenization ephezulu yengcindezi kanye ne-ultrasonic emulsification ukuthi i-ultrasonication ikhiqiza ngokufana okuthe xaxa, ama-emulsions azinzile. Ukuhlanganiswa emulsion ka-coconut-in-water emulsions kwavela kuphela ngemuva kokufakwa ku-homogenization enomfutho ophakeme, ngenkathi i-emulsion eyenziwe yi-ultrasonic emulsification yahlala izinzile ngesikhathi sokugcina kwezinsuku ezingama-30.
Uma kuqhathaniswa nokuxokozela kwemishini, ama-emulsions alungiselelwe inqubo ye-ultrasonic atholakele ukuthi azinzile isikhathi eside uma kuqhathaniswa nama-emulsions alungiselelwe ukuthukuthela kwemishini okungabangelwa usayizi omncane wamaconsi osimeme osimeme. Inqubo ye-Ultrasonic inika ama-emulsions azinzile kunendlela ejwayelekile yokunyakaza kwemishini. (bheka iRamisetty neShyamsunder, 2011)
U-O'Sullivan et al. (2015) bakhombisa esifundweni sabo ukuthi i-ultrasonic emulsification ihlale ikhipha ama-submicron emulsions (ngaphansi kuka-200 nm). Kodwa-ke, ama-nano-emulsions ngosayizi we-droplet ofanayo we-10nm angatholakala kalula futhi ngokuthembekile ngaphansi kwezimo ezilungiselelwe. Usayizi we-droplet wama-emulsions akhiqizwe nge-ultrasonically kungumsebenzi wokucubungula isikhathi kanye ne-amplitude ye-ultrasonic yazo zombili izinhlayiya nokuqhutshwa okuqhubekayo.
Ukulungiswa kwe-emulsion ecacile ye-nano-size-water (O / W) ne-ultrasonicator UP400St
Izinzuzo ze-Ultrasonic Emulsions
inqubo esebenza kahle kakhulu
ukusatshalaliswa kosayizi we-droplet
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kwe-oyile-emanzini (i-O / W) emulsion (amanzi abomvu / uwoyela ophuzi). Imizuzwana embalwa ye-sonication iguqula izigaba zamanzi / uwoyela ezihlukile zibe yi-emulsion enhle.
Isimiso Esisebenzayo se-Ultrasonic Emulsification
Ukukhiqizwa kwe-ultrasonic kwama-emulsions kanye ne-nano-emulsions (njengamafutha-emanzini namanzi ku-oyile emulsions) kusekelwe kumgomo wokusebenza we-acoustic cavitation. Ukuze wakhe i-acoustic cavitation, i-high-intensity, i-low-frequency ultrasound ikhiqizwa nge-ultrasound transducer futhi idluliswa ngophondo lwe-ultrasonic kanye ne-probe (sonotrode) ibe uketshezi. I-high-power ultrasound ibhekwa njenge-ultrasound ebangeni le-16-30kHz. Uphenyo lwe-ultrasound luyanwebeka nezinkontileka isib., Ku-20kHz, ngaleyo ndlela kudluliswe ukudlidliza okungama-20,000 ngomzuzwana kulowo ophakathi. Lapho amagagasi e-ultrasonic edabula kuketshezi, kushintshana ukucindezela okuphezulu (ukucindezela) / ingcindezi ephansi (i-rarefaction / ukunwetshwa) imijikelezo idala izimbotshana zemizuzu (ama-vacuum bubbles), akhula ngaphezu kwemijikelezo yengcindezi eminingana. Ngesikhathi sesigaba sokucindezelwa ketshezi namabhamuza, ingcindezi iba muhle, kanti isigaba se-rarefaction sikhiqiza i-vacuum (ingcindezi engemihle). Ngesikhathi semijikelezo yokwanda kokuminyanisa, izimbotshana ezikulolu ketshezi ziyakhula zize zifinyelele usayizi, lapho zingakwazi khona ukuthola amanye amandla. Ngalesi sikhathi, bahamba ngamandla. Ukufakwa kwalezi zimbobo kuholela emiphumeleni ehlukahlukene enamandla, eyaziwa ngokuthi yinto ye-acoustic / ultrasonic cavitation. I-acoustic cavitation ibonakala ngemiphumela eminingi enamandla kakhulu, ethinta uketshezi-uketshezi, okuqinile-uketshezi kanye negesi-uketshezi izinhlelo. Indawo yamandla aminyene noma indawo yokubamba iqhaza yaziwa njengendawo ebizwa ngokuthi indawo eshisayo, enamandla kakhulu endaweni eseduze ne-probe ye-ultrasonic futhi yehla ngamabanga akhulayo ukusuka ku-sonotrode. Izici eziyinhloko ze-cavitation ye-ultrasonic zifaka phakathi amazinga okushisa aphakeme kakhulu nezingcindezi kanye nokwehluka okuhlukile, iziphithiphithi nokusakazwa ketshezi. Ngesikhathi sokufakwa kwezikhala ze-ultrasonic ezindaweni ezishisayo ze-ultrasonic, amazinga okushisa afinyelela ku-5000 Kelvin, izingcindezi ezingafika kuma-200 atmospheres namajets wamanzi anama-1000km / h angalinganiswa. Lezi zimo ezivelele ezinamandla amakhulu zifaka isandla emiphumeleni ye-sonomechanical eqinisa izinqubo ngokuxuba okusebenzayo, ukusabalalisa kanye nokuqinisa amandla. Amandla e-shear e-ultrasonic, ukusakazwa ketshezi neziyaluyalu kuphazamisa amaconsi futhi uwaxube ngokufana. Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonication kukhiqiza ngokuthembekile ama-nano-droplets ngokusatshalaliswa kosayizi ofanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonic emulsification indlela ekhethiwe yokulungiselela ama-emulsions ka-oyela-emanzini / ama-nano-emulsions ngokuqina okuphezulu kwe-emulsion kanye neshalofu-impilo.
I-Ultrasonic nano-emulsions elungiselelwe ne-Hielscher UP400St ezindaweni ezahlukahlukene zamandla
Imiphumela ye-Ultrasonic Intensity ku-Emulsion Quality
Ikhwalithi ye-emulsion ibonakala kakhulu ngokuqina kwayo. Futhi, ukuzinza kwe-emulsion kuyisici sokusatshalaliswa kosayizi we-droplet nokwakhiwa kwe-emulsion.
Ukuqina kwe-Ultrasonic, okungukuthi i-amplitude nobude be-sonication, yizinto ezibalulekile ezithonya ikhwalithi ye-emulsion etholakele.
Kucwaningo, i-emulsification ye-ultrasonic ihlukaniswe izigaba ezimbili: Ngesikhathi sesinyathelo sokuqala, inhlanganisela yamagagasi okuhlangana kanye nokungazinzi kukaRayleigh-Taylor kuyenzeka, kubangele ukuqhuma kwamaconsi esigaba ahlakazekile aye esigabeni esiqhubekayo.
Phakathi kwesinyathelo sesibili, amaconsi ahlukaniswa nge-acoustic cavitation eduze kwezigaba zemingcele yamaconsi. Imiphumela enamandla yokuphazanyiswa kwamaconsi nokuxubana okubangelwa amagagasi ashubile ashukumisayo akhiqiza osayizi bamaconsi abancane kakhulu. Amandla we-Ultrasonic, amplitude, kanye nesikhathi sonication zibhekene nomthelela otholakele we-cavitation futhi ngaleyo ndlela amapharamitha anethonya elikhulu maqondana nosayizi omuhle emulsification. I-Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala.
I-Ultrasonic emulsification ubuchwepheshe bokucubungula obunokwethenjelwa, obusiza futhi busheshise ukukhiqizwa kwama-emulsions asezingeni eliphakeme ngamaconsi e-submicron kanye nano. Iphothifoliyo ye-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya ezinhlelweni zezimboni zezinhlelo zokusebenza ze-emulsification. Lokhu kusivumela kwaHielscher ukukunikeza i-ultrasonicator efaneleke kakhulu yekhwalithi yakho ye-emulsion ecatshangelwe kanye nenqubo yokusebenza. Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Hielscher Ultrasonics – Izinhlelo ze-Emulsification eziyinkimbinkimbi
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-emulsifiers ephezulu yokusebenza kwe-ultrasonic kusuka kwesincane kuya kwesikhulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic ngenqubo yakho ye-emulsification. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, izinto zokusetshenziswa, i-batch noma i-inline process kanye nomugqa wesikhathi.
Ama-emulsifiers we-Hielscher ultrasonic angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ukucubungula kwe-batch ultrasonic kufanelekile ekuhlolweni kwenqubo, ukwenziwa kahle futhi kube sezingeni eliphansi lokukhiqiza likasayizi ophakathi. Ngokukhiqiza amavolumu amakhulu emulsions, ukucubungula okusemgqeni kungaba lusizo olukhulu. Inqubo eqhubekayo yokuxuba emgqeni idinga ukusethwa okuyinkimbinkimbi – equkethe iphampu, amapayipi noma amapayipi namathangi -, kodwa isebenza kahle kakhulu, iyashesha futhi idinga abasebenzi abancane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kwe-emulsification yevolumu yakho ye-emulsion nenqubo yenqubo.
Ama-Ultrasonic Probes nama-Reactors we-Emulsification kunoma Yibuphi Usayizi
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza isibonisi esigcwele sama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla lomkhiqizo ogcwele lusivumela ukuthi sikunikeze i-emulsifier efaneleke kakhulu ye-ultrasonic yenqubo yakho yamandla nezinhloso zokukhiqiza.
Izinhlelo ze-ultrasonic benchtop zilungele ukuhlolwa kokusebenza kanye nenqubo yokwenza ngcono. Ukulinganiswa komugqa ngokuya ngemingcele yenqubo esungulwe kwenza kube lula kakhulu ukukhulisa amandla wokucubungula kusuka ezinkatho ezincane kuya ekukhiqizeni ngokugcwele ukuthengisa. Ukukhuphuka kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu yokukhipha i-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana. Nge-UIP16000, i-Hielscher inikeza i-emulsifier ye-ultrasonic enamandla kunazo zonke emhlabeni.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-emulsification ye-ultrasonic
Ubukhulu buyinto ebalulekile, ethonya ikhwalithi ye-ultrasonic emulsification ngokuqinile. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha i-emulsion yakho ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yemiphumela emihle ye-emulsification!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho ze-emulsification.
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokwenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezentengiso. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakuthuthukisa kanjani ukukhiqizwa kwakho kwe-emulsion.
Uwoyela-emanzini-kuqhathaniswa nama-Emulsions Amanzi-Kuwoyela
Ama-emulsions angaba uwoyela-emanzini noma amanzi-ku-oyili. Ngokobuchwepheshe, lapho kukhiqizwa uwoyela-emanzini-kuqhathaniswa namanzi emifudlaneni emafutheni, isigaba esisodwa (esaziwa ngokuthi isigaba esihlakazekile) sixubekile kwesinye (isigaba esiqhubekayo). Ngamanye amagama, uketshezi olulodwa lusebenza njengohlobo lwesisekelo lapho kufakwa khona olunye uketshezi. Lapho i-emulsion "inguwoyela-emanzini," uwoyela yisigaba esihlakazekile esisatshalaliswa esigabeni esiqhubekayo, amanzi. Emulsion yamanzi-kawoyela, izindima zishintshiwe. Ubisi luyisibonelo se-emulsion ka-oyela-emanzini, kanti ibhotela lingamanzi-ku-oyili.
Uyini umehluko phakathi kwama-Emulsions ka-Oyili-emanzini naseManzini?
Umehluko oyinhloko phakathi kwe-emulsion kawoyela-emanzini namanzi ku-oyili ukwakheka kwesakhiwo sokumiswa – okusho ukuthi yiluphi uhlobo lwamanzi olumisiwe kolunye. Ku-emulsion ka-oyela-emanzini, uwoyela uyisigaba esihlakazekile esixutshwe njengamaconsi amancane kakhulu esigabeni samanzi / esiqukethe amanzi (isigaba esiqhubekayo). Ngakolunye uhlangothi, i-emulsion yamanzi-kawoyela ichazwa njengokumiswa, lapho amanzi kuyisigaba esihlakazekile esenziwe safana namaconsi emizuzu esigabeni samafutha esiqhubekayo.
Inqubo ye-emulsification enomthelela efana ne-emulsification ye-ultrasonic idala amandla okudingeka kwe-shear kanye ne-turbulences yokwephula iziphuzo zibe ngamaconsi emizuzu nokuzixuba kahle.
Ukukhethwa kwama-emulsifying agents kungenye into ebalulekile. Yize amanye ama-emulsion asayizi we-nano angazinza ngokwemvelo, ama-emulsion amaningi awazinzile ngokwemvelo isikhathi eside. Ngakho-ke, ukwakheka kufanele kuklanywe ngokucophelela ukudala ukusabalalisa ngempilo yesheluli ethuthukisiwe. Akuwona wonke ama-ejenti we-emulsifying ahambisana nanoma yiluphi uhlobo lwe-emulsion. I-ejenti ye-emulsifying enokuncibilika okuhle emanzini ingahle isebenzise i-emulsion kawoyela-emanzini engcono kune-in-oil, kuyilapho i-emulsifier enokuncibilika okuhle emafutheni ingasebenza kangcono emulsion yamanzi.